Mgbanwe na ntụgharị na meteorology | Network Meteorology
Ntughari na ntụgharị
Maka meteoroloji, enwere ọtụtụ echiche dị ezigbo mkpa. Ha bụ banyere convergence na ntụgharị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịbawanye ogo na nkenke amụma ihu igwe, anyị ga-amarịrị etu anyị ga-esi tụlee ihe omume ndị a. Taa, anyị ga-arụ ọrụ na ịmara nkọwapụta ihe ịtụnanya ndị a na etu esiri nwee ya. Na mgbakwunye, anyị ga-ahụ etu o si emetụta oge na otu anyị ga-esi amata ha.
You chọrọ ịmatakwu banyere divergence na convergence? Anyị ga-akọwara gị ihe niile n'uju.
1 Gịnị bụ convergence na divergence
2 Usoro mmegharị ikuku
3 Mgbanwe Altitude
4 Ahụmahụ na ifufe
Gịnị bụ convergence na divergence
Mgbe n'ime ikuku a na-ekwu na enwere nkwekọ, anyị na-ezo aka n'ịzọpịa ikuku n'akụkụ ụfọdụ n'ihi nsonaazụ ya. Ntughari a na - eme ka ikuku buru ibu gbakota n'otu ebe. N'aka nke ọzọ, ọdịiche dị iche. N'ihi ngagharị nke igwe mmadụ, ọ na-agbasasị ma na-ebute mpaghara nwere obere ikuku.
Dị ka enwere ike iche, ihe omume ndị a na-emetụta nrụgide nke ikuku, ebe ọ bụ na, ebe enwere mmekọrịta, a ga-enwe nrụgide nke ikuku dị elu na nke dị ala karịa. Iji ghọta ọrụ nke ihe ndị a ị kwesịrị ịmara nke ọma na Ọnọdụ ikuku na ikuku.
Ka anyị were mpaghara ebe anyị chọrọ inyocha ikuku na okwukwo. Anyị ga-ese usoro nke ikuku ikuku na maapụ dabere na nrụgide nke ikuku. A na-akpọ ụdị nrụgide ọ bụla isohipsas. Nke ahụ bụ ahịrị nke ikuku ikuku. Na ọkwa kachasị elu nke ikuku, dị nso na tropopause, ifufe fọrọ nke nta geostrophic. Nke a pụtara na ọ bụ ifufe na-agagharị na ntụpọ dị ka ahịrị nke oke geopotential.
Ọ bụrụ n ’mpaghara a na-agụ akwụkwọ, anyị hụrụ na ahịrị ikuku a na - ezute ibe ya, ọ bụ n’ ihi na e nwere nnakọta ma ọ bụ ngwakọta. Ọzọ, ọ bụrụ na usoro ahịrị ndị a na-emepe ma na-ekewapụ, a na-ekwu na enwere ntụgharị ma ọ bụ iche.
Usoro mmegharị ikuku
Anyị ga-eche maka ụzọ awara awara iji nwee okpomọkụ karịa. Ọ bụrụ na okporo ụzọ awara awara nwere ụzọ 4 ma ọ bụ 5 na mberede ọ nwere naanị ụzọ 2, anyị ga-abawanye okporo ụzọ na mpaghara nwere obere ụzọ. Ihe megidere ya bụ mgbe enwere ụzọ abụọ na mberede enwere ụzọ ndị ọzọ. Ugbu a, ugbo ala na-amalite ikewapu ma ọ ga-adị mfe ibelata mkpọchi. Otu ihe ahụ, enwere ike ịkọwa maka ntụgharị na ntụgharị.
Otu n'ime ọnọdụ ebe ọ ga-ekwe omume maka ịrị elu na ọdịda nke igwe ikuku ka a hụrụ mgbe enwere mmekọrịta na ikuku ikuku. Ọsọ ndị ikuku na-agbago na-agbadata na-agbadata n'etiti 5 na 10 cm / s. Ihe anyị ga-eche bụ na, na mpaghara ebe ikuku dị, anyị ga-enwe nrụgide nke ikuku dị elu karịa, yabụ, ịdị adị nke anticyclone. Na mpaghara a anyị ga-enwe ezigbo oge ma nwee ọ stableụ anụ ọkụ.
N’aka ozo, na mpaghara ebe ikuku di iche, ayi g’enweta nbudata nke ikuku. Mpaghara fọdụrụ na obere ikuku. Ikuku ikuku na-aga ebe ọ na-enwechaghị nrụgide iji mejupụta oghere ndị ahụ. N'ihi nke a, mmegharị ikuku ndị a nwere ike ibute ajọ oke ikuku ma ọ bụ otu ihe yiri ya na ajọ ihu igwe.
Mmetụta nke esemokwu na mmegharị nke ifufe gburugburu nrụgide dị elu ma ọ bụ dị ala, na-eburu n'uche na esemokwu ahụ n'onwe ya na-akpata mgbanwe na ntụziaka nke ifufe, ọ bụ iji mepụta ntụgharị ma ọ bụ ntụgharị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, akụrụngwa nke na-egosi ọsọ ọsọ n'akụkụ isobars bụ nke na-abịa site na ikuku nke na-abanye n'etiti nrụgide dị ala ma ọ bụ chụpụ ya n'èzí mgbe enwere nrụgide dị elu.
N’ebe dị iche, ikuku ikuku na-ekewa ụzọ abụọ nke na-amalite ịkpafu n’ụzọ dị iche iche. Usoro a na - achịkwa ikuku a nke ikuku na - emetụta ihe ndị a. Mgbe anyị nwere nghọtahie, ikuku na-agbanwe na ọkwa abụọ: elu na larịị na ala. Ga n’ikuku site n’otu ebe ruo ebe ọzọ na-apụta n’ụzọ kwụ ọtọ. Mmegharị ikuku ndị a na - ebute mmalite ihe a maara dị ka sel. Ọ bụrụ na njikọta a dị ntakịrị, ikuku ikuku ga-ebili n'ịdị elu. Mgbe ha ruru otu elu, ha na-ekewa n'ime mmiri abụọ nke ga-aga n'akụkụ ọzọ.
Ọ bụrụ na ikuku ndị a amalite ịgbadata, ha na-eru mpaghara njikọta, na nso ala, anyị na-ahụ mpaghara ọzọ dị iche ebe ọ na - eme ka ikuku ikuku na - agagharị na nke ọzọ na nke ha mere na elu. Nke a bụ otú sekit ma ọ bụ cell na-emechi.
Divergences na elu na-etolitekarị na mpaghara ndị dị n'akụkụ na mpaghara polar. N'ebe ndị a, ikuku na-emetụta ikuku gburugburu na njupụta ya. Ihe mmeghari ndia nile bu sistemu ato buru ibu nke ahụ na-eweta usoro ebe ikuku na-ebili ọtọ.
Ahụmahụ na ifufe
Ọ bụrụ na ahụmịhe baara anyị uru ọ bụla, ọ bụ na mgbe anyị rutere nso oke osimiri, a na-enwekarị mmekọrịta na-akpata mmelite nke ihe ruru mita 8.000 n'ịdị elu. Ọ bụ mgbe anyị nọ n'ogo ahụ, na nrụgide nke 350 millibars, mgbe ọdịiche pụtara ìhè malitere ịmalite.
Ọ bụrụ na anyị ahụ ịda mba ma ọ bụ oké mmiri ozuzo anyị nọkwa n'oké osimiri, ọ bụ na ikuku ikuku na-agbanwe. Mgbapu a nke igwe ikuku na-amanye ya ka o bilie ọtọ, ebe ọ na-ajụ oyi ma na-agbakọ. Ka ikuku na-arị elu na-asọ oyi, ha na-eme ka mmiri ojii, karịsịa ma ọ bụrụ na ịrị elu nke igwe ikuku dị kpam kpam.
Enwere m olile anya na iji ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere echiche dị iche iche na ntụgharị na mkpa ọ dị na ihu igwe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ntughari na ntụgharị
Mgbe enwere ikuku nke ikuku n’elu ala, ikuku ikuku n’ebe ahụ ka elu, ebe ọ bụ n’ebe ahụ enwere ikuku ikuku, yabụ, ikuku na-agbadata ọtọ. Mgbe ifufe ndị a rutere n’elu ha na-aga ịchọ ebe nrụgide dị ala, ebe ikuku ikuku ga-eme, ọ bụkwa n’ihi ntakịrị nsogbu a ka ifufe nwere ike ịrị elu.
Agbanyeghị, mgbe ị na-ede paragraf a (ọbụnadị na paragraf ndị ọzọ):
“Dị ka a pụrụ ịkọ n’echiche, ihe omume ndị a na-emetụta nrụgide nke ikuku nke ukwuu, ebe ọ bụ na, ebe enwere njikọta, a ga-enwe nrụgide nke ikuku dị elu karịa na nkewa dị obere. Iji ghọta otú ihe ịtụnanya ndị a si arụ ọrụ, ị ga-amata nke ọma ikuku na ikuku.
ị dee usoro na-abụghị ya, na-ekwu na nrụgide dị elu karịa ebe ntụgharị ikuku, yana nrụgide dị ala na ntụgharị nke ikuku.
Ọ gwụla ma ị pụtara Mbugharị na Mgbanwe nke na-ewere ọnọdụ ọ bụghị n'elu elu kama ikuku. Ọ bụrụ otu a, echere m na ị kwesịrị ịkọwapụta nke ahụ, n'ihi na ọ na-etinye onwe ya n'ọgba aghara!
N'otu aka ahụ, ọmarịcha ọkwa!
Ekele si Colombia!
Zaghachi Juan Manuel Sánchez
Na-aga na satịlaịtị